Họrọihe kacha mmakachasịmmaabụghịọrụsiri ike。 ụtụtụdabere na uledịukwuu a na-eme，manaakụkụburu ibu na-adaberekwa nagị-onyeọrụ。虚拟专用网（VPN），虚拟专用网（VPN），虚拟专用网（VPN），虚拟专用网（Onyeọbụlanwere mkpa diche iche ma abịa）.
N’ozuzu，Béziena enwere和VPN都在nnukwu aha diche iche ndndna-arịwanyeelu na ugboro ugboro mana-atụlenke ukwuu n’zz niile。 Nke ana-agụnyenzuzo naamaghịaha，ọsnankwụsiike，ọkwaọrụndịahịa，atụmatụntanetịna N’ezie，njirimarandịọzọtinyerenhọrọọnụahịa.
0.1 Nleta EgoNtanetịVPN & Atụmatụ（Emelitere 2020年3月）
1 Ikakamma 10 VPN上网本2020
1.1.1 Ngosipụtangwa ngwa ExpressVPN
1.4 IVPN VPN＃2 Nchedo
1.4.1 VPN来源aro maka ezigbo来源：
1.5 Njirimara VPN isi 4 XNUMX-欺骗性ebe
1.5.1 P2P enyi na enyi VPNọrụ
1.6 Njirimara VPN isi 6 XNUMX-Ọrụndịahịa
2 Kedu ihe kpatara ogendụVPNagaghịabụezigboọrụ
3 N’ihe eji VPN eme ihe-Gịnpatkara ga-ejiatụleVPN?
3.1 1. VPN nkekachasịelu makaazụmahịa
3.2 3. VPNdọụnụala 服务
3.3 5. VPN makandịrụgam akporo
3.4 7. VPN maka数字自由
Nleta EgoNtanetịVPN & Atụmatụ（Emelitere 2020年3月）
Trinụahịakacha mma-egbu osisi免费试用版SavaNetflix NkwadoNkwadoP2Pngwaọrụ
$ 3.49 /刀 30ụbọchị 3,000 + 5
$ 1.99 /刀 30ụbọchị 3,000 + 5
$ 0.83 /刀 10
$ 2.42 /刀 5
$ 7.99 /刀 31ụbọchị 2,000 + 耐克 30ụbọchị 700 + 耐克 7ụbọchị 1,100 + 耐克 Ndụmọdụbara uru makandịna-ereahịaVPN
1- NordVPN dkịkwụọgwọ70％-Pịaebe a iji nye iwu（ụbọchịikpe n’efu 30）.
2- Otu esiahọpụtaVPN? –
3-Okwudịicheiche iche maka VPN ro aroanyị：
Ikakamma 10 VPN上网本2020
Atụmatụatụmatụogologo oge ga-ekwe omume
ExpressVPN可以使用ama ama ama nantkkwasịobi naazụmaahịaVPN mabụrụkwaeziokwu，otu n’imenhọrọanyịkachasịelu。 Dabere na英属维尔京群岛，乌克哈比克（Ner d nchebe ma kwsie ike）.
Nwee ihekarịrị3,000 sava na mba 94 gburugburuụwa，netwọkyadịukwuu na-enyendịụrụ网站nabọlambaọbụlana-enwusi ngwa ngwa ngwa。 Ndepụtankeikeọna-enyebụogologo madịoke mma，gụnyerentinye ederededịelu，nwetaọdịnayana njikwageolocation-ọrụdịkanetflix na BBC iPlayer na nkwado makaòkèP2P.
N’ezie，e nwekwara ton nke mgbakwunye nkena-abịanaọrụnke na-eme kaọbụrụnọmbanandepụtaa.
$ 8.32 kwaọnwagaa n’ihu，nkedịmwute ikwu naakụkụdlu elu.
ụtakawuomaka ExpressVPN n mimi.
Ngosipụtangwa ngwa ExpressVPN
M jisiri ike nweta 83 Mbps可通过ExpressVPN获得。 Nke aabụghịmgbe niile naọtụtụVPN.
Nlegharịsọsọsiterena ihe nkesa美国.
Ngalaba ping si nanetwọk新加坡na-egosi 11毫秒，bụnke weeredịkaezi mma.
Ntagharịsọọsọsi na ihe nkesa新加坡.
Akwụkwọdịmma maka mmiri。 Echere m na okporoụzọP2P nikereikeịbaọsọsọkarịaọhụụ.
请给我ịmaraọtụtụn’ime aha a nke ukwuu和法力，请给iju manya kaọdịgịugbu a。您可以在TorGuard上找到更多信息，也可以在任何其他VPN站点上找到dakkaịke ie ie ie Tor Tor Tor Tor Tor Tor Tor.
Maatụmatụnhọrọnhọrọọtụtụndịọwuru n’imeọrụyana nnukwunjikọnjikọna-eme ka nke adịmfe n’ime okenhọrọm。 Ikikeịhazigharịkwaezoro ezo nwere ike gagaghịadịka nnukwu echiche manaọna-enyendịọrụakaịchekwanchedo naamaghịahadịkamkpa ha sidị.
TorGuard na-ebidoịnyeohere maka usoroọhụụWireGuardọgbọna-esote，nkepụtaranaọna-ebi na njedebe nkenkànaụzụVPN.
$ 4.99 kwaọnwa.
Maktakwuo maka TorGuard VPN网络服务.
Atụmatụna-adịala na-efu ala
Nnwetadịelu na ogeịkwụsị
Nzuzo zuru ezu网站导航
Ogologo oge nkwaịkwụụgwọego
Ig gbasara PureVPN
NdịrụP2Praara onwe ya nye
Sava kachascha maka kagba egwu
Ig gbasara VyprVPN
Nweta zuru oke na Netflix na ebeọzọ-ejedebeọdịnaya
Ig gbasara IPVanish
Na-atụaro VPN maka kacha mma匿名性：
NordVPN – N’bụnke hiwere isi na巴拿马，ụlọọrụVPN a dabara n’okpuru ikike obodo（nke na-emezughi oken’ụzọiwu njigide数据）.
冲浪鲨 – Surfshark na-anabatakaadịakwụmụgwọniile makaịkwụụgwọ（VISA，Master，AMEX，Discover）ma na-enyenhọrọụkwụụgwọna-amaghịahagụnyereBitcoin，GooglePay na AliPay.
IVPN VPN＃2 Nchedo
网站na usoro nzuzo ezoro ezo wuru na njiri mara nkesọftụwiaonyeahịa，VPN taa na-enye nchekwa naọtụtụwakwa。 N’ezie，ihekachasịmkpabụnchekwa nantụkwasịobi nkenjikọọna-eme n’etitigịnathentanetịbụezie.
Otu iheọzọnaọtụtụndịna-enyeọrụVPNbụigbuọkụ。 Nke apụtarana ogeọbụlanjikọdịn’etitingwaọrụgịna ihe nkesa VPN agbajiri maọbụfuru efu n’ihi ihe hebụla，onyeahịaVPNga-akwụsịdata niile site naịpụmaọbụ.
VPN，VPN，VPN，VPN和VPN。 Nd na-ah-haka makaọrụVPN ma mara nke a ma mee ka otuakụkụna-akpọ隐藏，重影或VPN模糊处理（okwu okwudịgasicheiche，mana hana-apụtakwaotu iheahụ）。 Nke a na-enye akana-emegharịusorondịna-achọsiọrụike makandịụrụVPN.
ỤfọdụVPNs na-aga ogologo iji nyerendịahịahaakaịchekwaaha ha ma weebịana njirimara ana-akpọVPNabụọma obu otutu hop。否否否否否sava VPN站点否否站点否否否否VPN tupuịpịtantanetị。 Ewezụgaụzọmbugharịya，na-ezobe加密ya nke na-agbakwunye nchebeọzọ.
NordVPN na-eji izo ya ezo abuo ijihụna nzuzo na nchedokachasịelu（mụtakwuonkeanyịNyocha NordVPN）.
Ewezụgana nke a，一个na-agbakwunyeọrụndịọzọnaọtụtụVPNọrọoniiledịkachịkọta恶意软件，nkwụsịọkọlọtọweebụnandọzọ。 nụezie na ihendịa niledịmma，echezọlanzube b-isi-na-ejikọtanjikọgịn’enweghịaha.
VPN来源aro maka ezigbo来源：
ExpressVPN – Hostingdebere ihekarịrịpuku savaatọgafere mba 3,000 gburugburuụwa，netwọkya sara mbara na-enyendịọrụihefọrọnke nta kaọbụrụmbaọbụlaohereịnwetangwa ngwa.
ExpressVPN在亚洲发布。 Ping = 11毫秒，budata = 95.05 Mbps，bulite = 114.20 Mbps（leenkọwazuru oke na ExpressVPN）.
Ngosipụtangwa ngwa ExpressVPN站点在澳大利亚和ikesa。 Ping = 105毫秒，budata = 89.55 Mbps，bulite = 38.76 Mbps.
Njirimara VPN isi 4 XNUMX-欺骗性ebe
Chem na obughi oge oso banyere oso，kamakwa idiadi。 wanụụkwanyeọd aya naya Netflix美国dọkaọmụmaatụgaga-achọVPN nke nwere sava na mbaahụ。 N’otu akaahụ，na UK maọbụrụnaịna-eleleọdịnayaiBBC.
Chinabụrụnaịnọna mba nke na-eleta Intanetn’ụzọdịukwuu，ma mabụna-eme njem na otu，吉卡中国，jide n’aka naịhọrọọrụVPN VPNdịmma naịnwetagburugburu。 O siri ike na China ebe ihefọrọnke nta kaọbụrụiile niilentanetịnwereikeịchọtaiheọbụlamaọbụndrụkwadoro.
IVPN防火墙，VPN防火墙，VPN防火墙，VPN防火墙，防火墙，防火墙，防火墙等。 Nkea na-ahụmaka na VPNgịna-arụọrụna mbandịahụnwere nyocha siri ike.
P2P enyi na enyi VPNọrụ
护卫队 – Ndekọsọkachasịmma，nnukwu uru，ma nweta gburugburu iyi na-aga网站nanatụtụISP.
Njirimara VPN isi 6 XNUMX-Ọrụndịahịa
TorGuard-VPNKachasịakwado，na-agbanzukọna-arụrriji kwadondịụrụya（mụtakwuoihe naNtụleghachiTorGuard Timothy）.
Dịkaụlọọrụọbụla，NDịVPN we Agaghịmakpọndịhanọebe a，ma jide n’aka na m ga-akpak ha na nke a na nyochaọbụlanke VPN.
Otu ihe m choro imesi ike bu na obu maka oru nke teknuzu dika VPN，onwebeghi ihe nghapu maka ulo oru ndi n’enye aka na ya adighi enye ezi nkwado nke ndi ahia。 ịdk mkpa。 ụbụrụnịna-edebanye aha makaọrụVPN，gbaambọhụnaịga-aga nyochaụfọdụijihụotu ha si eme na nkwadondịahịa.
Naụfọdụna-atụkwasịobi n’usoro usoro tiketidịnjọ，Mana ha nwereikeịkankáịzaghachi。 You ga-eche nịnọdụn’ụlọna iwe iwe ka emailọbụlana-abịakwutegịmgbeụbọchịmaọbụabụọgachara-cheta，ịna-akwụụgwọmaka iheùgwùnke ijiọrụha.
Kedu ihe kpatara ogendụVPNagaghịabụezigboọrụ
VPN的提供者和用户都在使用“ Nd Nd”的VPN。 VPN ez ez VPN VPN VPN VPN VPN VPN VPN VPN 100 100 100 100 $ 100-kwksịrịtụleya.
VPN站点naọdịdịhachọrọụlọọrụiji tinye nnukwu ego na mmepengwaahịa，akụrụngwa，akụrụngwa，yanaụgwọndzọzọ。 Ọbụrụna ha ga-ewere egogịotu oge，nyegịogendụgị-gịnịga-eme mgbeọdọmmiriahụbidoronkụ?
Chee echiche dika atumatu ponzi，ebe ndi ohuru no na akwado oru gi。 Mgbeatụmatụahụburu nnukwu ibukarịaegoọhụụiji kwado，ọna-ada。 Naatụmatụponzi nke ga-ebute mmebi ego.
Na VPN VPNbụghịihe doro anya。 Nikereikeịchọpụtamgbaàmàna-enweghịọrụna-apụnaazụmaahịa。 Uzodịnwayọ，njikọtadịnjọ，nkejọrọnjọ-Enkere ikeịnọchianya nchekwa site na nkwado na nkwadoadịghịmma.
N’aka nkeọzọ，onye na-ewetaọrụnweikeịbelataego ya site naire datagị，nkedịnjọkarịaịnyeọrụdịala。 Yabụtupuịkwatukaadịakwụmụgwọgịmakaatụmatụndụgị，cheemakaọghọmdịna ya nwere ike ibilite naatụmatụdịka nkeahụ。 Onweghi onye nweike ike inye onyinye n’efu.
N’ihe eji VPN eme ihe-Gịnpatkara ga-ejiatụleVPN?
1. VPN nkekachasịelu makaazụmahịa
Anyịniilenọebeahụdịkaụmụakwụkwọ;不可抗拒的自我自我网站na mgbawa nke igwedijitalụna nke mgbasa ozi，nchekwa na nzuzo nasọksabụrụlamkpa ngwa ngwa makaụmụakwụkwọgburugburuụwa.
Ọbụezie nan’ọtụtụogeụmụakw，kwọga-ahọrọnaanịmakaọrụdịọnụala，gịnịkpatara na mgbeịga-ejizụtaotu dollarkarịankekachasịmma n’imeahị。 NordVPN dabaraakụkụa n’zzdịmma mana-akwụụgwọn’akụkụ，na-enyeụmụakwụkwọngụkọtankeatụmatụndịọzọ.
Mkpanaka ngwaọdịnalaha na mgbakwunye ihechọgharịha na-emekwa ka hadịmma makaụmụakwụkwọna-aga，na-enye ohereọrụnchebe nalaptọọpụha na ama na ebeọbụlana kampos.
3. VPNdọụnụala 服务
Fọdụmgbasa ozi mgbasa ozi na-amachiọdịnayadabere naọnọdụn’ihi ihedịiche ichedịkaiwu obodoakọwapụtara，iwu nyocha，maọbụnkwekọrịtaikikere。 Netflix的IPlayer BBC。 Iji nweta ihea，VPN虚拟专用网VPN GA-EME.
Ụịaụụụụụụụụs sụụụụsụụụụụụụụụ Kasịmmaga-arụsiike bugharia ihe nkesa IPs已将白名单eme nambụamachibido IP列入白名单。 N’ezie，ụfddụVPNs maara na ha haapụghịakwado Netflix ma kwuo n’eziokwu na haapụghịịrụọrụha.
网站naikeọsọyadịoke mma na okenetwọnkesa savadịobosara，ExpressVPN na NordVPN nikereikebịabụọkachasịmma naazụmaahịamakaịgbasamgbasa ozi网站nanaọtụtụisi-ọbọghị。 ike n n n ike ike HD Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix HD Netflix.
5. VPN makandịrụgam akporo
可能是VPN网络-emefaịlụP2P（正在租借），是由mana nkeahụabụghịchaeziokwu提供的。 ụzio zio zioọọọọọuk uk uk uk uk uk uk ukịịịịịzi zi zi zi.
Noọtgeoge en wenịna-enyeọrụntanetịna-echegbu iyi mgbe ha na naekwu na ndP nkesa P2Pfaịlụna-eritọtụtụ带宽dịnụ。 Nkeaarụptalaọtụtụmgbe，na-ebelataọsọnke ndrọrụP2P.
Ezigbo VPN-dka TorGuard，佐治亚州-亦称为ISP。 N’ezie，mgbeịna-eji VPNna-akụihe，ISPgịagaghịamatakwa naịna-agba.
7. VPN maka数字自由
Anyịna-ejinjikọnjikọtana isiokwu a。 WHSR nwetaụgwọntinye aka n’akaụlọrrndịakpọtụrụaha na isiokwu a。 Echicheanyịdabeere na ezigboahụmahụna data nkesa data n’ezie.
انتخاببهترینمطلوببهترینهاکارسادهاینیست。 بستگیزیادیبستآدبهآزمایشاتگستردهانجامشدهدارد，امابخشعمدهآننیزبهشمابستگیدارد-کاربر هرکسنیازخودراباتوجهبهشرایطمختلفداردسرویسشبکهخصوصیمجازی（VPN）ودوستداریدیانه，پیداکردنمطلبیکهبهترینچیزدرهمهچیزباشدآساننیست. بهطورکلی，بادرنظرگرفتنبسیاریازVPNها，متوجهشدمکهچندنامبزرگوجودداردکهبارهاوبارهابهآنهارسیدهاستوبسیاردرهمهردههایکلیدیرتبهبندیشدهاست。 اینشاملحریمخصوصیوناشناسبودن，سرعتوثبات，سطحخدماتمشتری，ویژگیهایفنیوالبته，های. Contents0.1 VPNههررررVPN VPN VPN（2020（2020 2020 2020 2020 2020 2020